Zisho ukuguqa ezempilo eTigray - Bayede News
Kushone owesifazane onesifo sikashukela kwathi abesifazane babeletha ebumnyameni benganakwe muntu eTigray ngenxa yokuthi izibhedlela zakulesi sifunda bezingenawo ugesi nezisebenzi zazo zingekho ebusuku.
Lokhu kuvezwe izakhamuzi kwaphinde kwafakazelwa amaqembu ezenhlalakahle, izisebenzi zezokwelapha ababona usizi lwabantu njengoba leli zwe lehluleka ukuvuselela uhlelo lokunakekelwa kwezempilo olonakele kakhulu ngemuva kwezinyanga ezintathu kwasuka impi phakathi kwamabutho kazwelonke naweqembu elalibusa lesi sifunda iTigray People’s Liberation Front (TPLF).
Ezinye izibhedlela kuvela ukuthi azisebenzi nhlobo njengoba zingenamanzi, ugesi kanye nokudla. Izibhedlela eziningi zaphangwa okwabalekisa izisebenzi.
“Kubikwa ukuthi uhlelo lwezempilo lwaseTigray lubheke eweni,” kusho iHhovisi le-United Nations iCoordination of Humanitarian Affairs (OCHA) embikweni eliwukhiphe ngoNhlolanja ophinde waqaphela ukuthi izibhedlela ezintathu kweziyi-11 ezisebenza kahle noma kangconywana kulesi sifunda.
UNgqongqoshe Wezempilo kuleli zwe, uLia Tadesse, uthe isimo siyaqhubeka nokuba ngcono kakhulu.
Ekhuluma nabezindaba uthe uhulumeni usuthumele izimpahla ezikhungweni zezempilo ezingama-70 kwezingama-250 kanye nama-ambulensi ayishumi. “Izikhungo eziningi zezempilo ziphangiwe, sizama ngakho konke esinakho ukuthumela izimpahla kulesi sifunda. Sigxile ekubuyiseleni izinsiza, ukuxhasa izisebenzi zezempilo ukuthi zibuyele emuva futhi kuqinisekiswe ukuthi banakho okuhlinzekwayo,” kuphetha uNgqongqoshe.
UNdunankulu u-Abiy Ahmed ezinyangeni ezimbili ezedlle umemezele ukuthi ulinqobile iqembu elalibusa lesi sifunda kepha imininingwane yesimo esingesihle ayisheshanga ukuvela njengoba ezokuxhumana esifundeni zingasebenzi futhi uhulumeni ulawula ngokuqinile ukufinyelela kwezintatheli nezisebenzi zosizo.
Izintatheli bezingavumelekile ukungena kulesi sifunda ngakho bezingaqiniseki izigigaba ezenzeka kuso ezibikwa yizakhamuzi kanye nabezempilo.
Ngokusho koMnyango Wezempilo, ngaphambi kwale mpi eyaqala ngoLwezi nyakenye, iningi labantu bakulesi sifunda belikwazi ukufinyelela ezibhedlela nasemitholampilo.
Umvuka wendulo ngoMengameli we-Ethiopia
Impi kuleli zwe yaphazamisa ukufinyeleliswa kwezinsiza, okubalwa kuzo imithi kashukela kanye nokunakekelwa kwabesifazane osekuholele ekufeni kwabantu abaningi obekungagwemeka, kusho isitatimende se-International Committee of the Red Cross.
Ngokusho kwe-OCHA, kulesi sifunda kusebenza ama-ambulensi angama-30 kwangama-280 kulesi sifunda.
Owesifazane othile uchaze umzabalazo wakhe edolobheni iSheraro ngoZibandlela zingama-22 efuna amaphilisi okuvikela ukukhulelwa ngemuva kokuthi umngani wakhe emtshele ukuthi udlwengulwe amadoda amahlanu.
“Bekungekho ngisho isisebenzi esisodwa esibhedlela, isibhedlela besiphangwe sonke, bekusele uphahla neminyango kuphela,” kusho lona wesifazane.
Anathi Mtaka Feb 12, 2021